Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana | Diary 2016
Niaiky i Isaia mpaminany hoe tsy ho nahomby na nanan-karena ny fanjakan’ny Joda raha tsy notahin’i Jehovah. Hoy izy: “Jehovah ô, ... noho ianao no mahatomombana izay rehetra ataonay.” (Isaia 26:12) Miaiky toy izany koa isika rehefa mandinika ny zava-bita tamin’iny taom-panompoana lasa iny. Manao “zava-mahagaga, izay mbola tsy natao” tokoa i Jehovah. (Eks. 34:10) Eritrereto fotsiny ange ny fitahiana sasany nomeny antsika e!
Nisy vokany tsara, ohatra, ny tranonkalantsika jw.org. Efa misy amin’ny fiteny 600 mahery izao izy io, ary misy amin’ny fiteny 750 mahery ny zavatra azo vakina sy alaina ao. Tena manampy ny olona tso-po hahalala ny fahamarinana io tranonkala io. Diso fanantenana tamin’ny fivavahana, ohatra, ny mpivady iray satria hitany hoe mihatsaravelatsihy fotsiny ireo milaza fa mpivavaka. Nahita ny tranonkalantsika izy ireo rehefa nitady ny fivavahana marina. Nanomboka namaky lahatsoratra sy nijery video tao foana izy ireo. Nalainy tao koa ny bokikely Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro, ary nanomboka nanao teny vakina niaraka tamin’ny zanany mianadahy izy ireo. Teo am-panaovana teny vakina mihitsy aza izy ireo rehefa tonga ny Vavolombelon’i Jehovah, indray maraina izay. Noresahin’izy mivady tamin’ireo Vavolombelona fa betsaka ny fiovana nataon’izy ireo noho ny zavatra hitany tao amin’ilay tranonkala. Nesoriny, ohatra, ny tombokavatsa sy ny kavina tamin’ny vatany ary ny sary masina tao an-tranony. Tsy nankalaza fety intsony koa izy ireo ary tsy nijery filma tsy mety amin’ny Kristianina. Talohan’ny nihaonany voalohany tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah no nanaovany an’izany. Efa mpitory izy mivady tamin’ity lahatsoratra ity nosoratana, ary mieritreritra ny hatao batisa tsy ho ela. Efa mpitory koa ny zanany iray.
Betsaka no nanoratra tatỳ aminay ary nankasitraka ny tele JW. Voadika amin’ny fiteny 70 mahery izao ilay fandaharana isam-bolana ary mbola hiampy ireo fiteny ireo. Maro no mijery azy io rehefa manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Hoy ny rahalahy iray: “Mbola tsy nitatra be hoatr’izao ny fandaminan’i Jehovah, nefa izao izahay vao tena mahatsapa hoe akaiky an’ireo ao amin’ny foibe.”
Fotoan-dehibe ho an’ny vahoakan’i Jehovah foana ny fivoriamben’ny vondrom-paritra. Anisan’izany ilay tamin’ny taom-panompoana 2015. Nisy video sy sary 42 tamin’ilay izy. Nisy mozika kanto enina koa nanokatra ny fandaharana. Hoy ny rahalahy iray: “Hoatran’ny hoe tsisy te hiala teo amin’ny sezany mihitsy nandritra ny fandaharana, satria tsisy te ho very tombontsoa.” Hoy koa ny misionera iray: “Rehefa nijery an’ireny video ireny aho, dia vao mainka nino hoe marina ny zavatra inoako ary tena misy ilay Fanjakana.”
Notahin’i Jehovah koa isika tamin’ny taon-dasa ka nomeny hira vaovao. Hoy ny mpivady iray: “Hoatran’ny hoe nofihinin’i Jehovah izahay rehefa nivoaka ireo hira vaovao. Imbetsaka izy ireny no nanampy anay hitraka.” Hitantsika tamin’iny fivoriambe iny fa niasa mafy tamim-pitiavana ny orkesitra sy ny antoko-mpihiran’ny fandaminana, mba hahafahantsika hidera an’i Jehovah.
Mampirisika anareo izahay mba hanahaka an’i Jehovah ka handray tsara an’ireo miverina aminy
Mampiasa tabilao fampirantiana ve ny fiangonanareo? Tena nisy vokany tsara io fomba fitory io. Sambany mantsy vao mandre ny vaovao tsara ny olona sasany mipetraka amin’ny tranobe na tanàna misy mpiambina. Na ireo tsy mitory intsony aza mandray soa koa. Nanatona an’ireo Vavolombelona nanao fampirantiana ny lehilahy iray, any Korea Atsimo, tamin’ny Janoary 2015. Nolazainy fa nisaintsaina ny fifandraisany tamin’Andriamanitra izy vao haingana. Nanaiky hianatra Baiboly izy. Nanomboka nivory izy tamin’ny Febroary, niala tamin’ny sigara tamin’ny Martsa, nitsidika Betela tamin’ny Aprily, ary mandroso tsara izy izao. Santionany amin’ireo tantara maro be voarainay atỳ amin’ny foibe io.
Mivavaka izahay mba hanampy an’ireo tsy mitory intsony hiverina amin’i Jehovah ilay bokikely navoaka tamin’ny fivoriambe tamin’ny herintaona. Efa kely mantsy sisa ny fotoana tavela. Mampirisika anareo koa izahay mba hanahaka an’i Jehovah ka handray tsara an’ireo miverina aminy.—Ezek. 34:16.
Tena nitahy ny vahoakany i Jehovah tamin’iny taom-panompoana lasa iny. Tsy fantatsika izay mbola hataony, fa mila manam-paharetana fotsiny isika. Tia anareo rehetra izahay ary mivavaka ho anareo foana.
Mirary soa ho anareo,